Tilmaanta farsamada - Mika Pipeline Technology Co., Ltd.
Inta badan qolofta waxay ka kooban tahay heerar kala duwan oo bir aan kala maarmin. Badanaa, macaamiisha waxay adeegsanayaan birlabyo si ay u ogaadaan tayada sheyga. Haddii ay jirto magnetism, maaddadu ma fiicna. Xaqiiqdii, iska soo horjeedku waa run. Magnetism macnaheedu waa in sheyga cayriin leeyahay adag iyo xoog sare. . Sababta oo ah clamps-ka haatan la sameeyay waxaa badanaa laga sameeyaa bir aan kala go 'lahayn sida 201, 301, 304, iyo 316, ka dib daaweynta kuleylka, walxaha ceyriinka waxay noqon karaan kuwa aan magnetic ahayn, laakiin waxyaabaha ceyriinka ah ee loo adeegsado soo saarista jajabku waa inay la kulmaan adkaanta iyo xoogga gantaal ee sheyga laftiisa. , Markaa adkaanta iyo xoogga gantaalku waxa kaliya oo la waafajin karaa habka qaboojinta, ee u baahan maadada jilicsan in lagu duubo dhuuban khafiif ah. Ka dib isku-duubista qaboojinta, runtii way sii adkaanayaan waxayna sidoo kale abuuri doonaan aalad magnetic.
Doorka boolal jilicsanaanta
Waqtigan xaadirka ah, lakabka galvanized dusha sare ee biraha kaarboolaatada kaarboonku kujira ayaa door firfircoon ka qaadanaya. Inta badan biraha birta leh ee DIN3017 clamps sidoo kale waa la jaan qaadaa, kuwaas oo ka ciyaari kara door jilicsan. Haddii aadan u baahnayn shaandhaynta zinc, waxaad u baahan tahay iskudaro wax ah sidii saliideysan. Waqti kasta, xarunta wax soosaarka ayaa la qalajin doonaa, heerkulka inta lagu jiro safarka ama jawiga adag ayaa sababi doona luminta, sidaa daraadeed jilidda ayaa hoos u dhici doonta, marka waxaa lagu taliyaa in birta birta sidoo kale la buufiyo.
Ku dhejinta T-bolt guga
Isku-dhafka T-bolt ee guga ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa xamuulka culus ee xamuulka culus waxayna ku dallacaan nidaamyada hawada. Ujeedada guga waa in la dhexdhexaadiyo ballaarinta iyo kala goynta tuubada tuubada tuubada. Sidaa darteed, markaad ku dhejineyso isku hayntaan, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid dhamaadka guga ma noqon karo gebi ahaanba hoos. Haddii dhab ahaantii ay jiraan laba dhibaatooyin dhammaadka: mid waa in guga uu lumiyo shaqadiisii ​​dhexdhexaadinta ballaarinta kuleylka iyo foosha oo uu noqdo firfircoon adag; in kasta oo ay taasi waxoogaa yarayn karto, gabi ahaanba ma jiro dariiq lagula qabsado ballaarinta kuleylka iyo foosha. Ta labaad waa kuleylka nidaamka xawaareynta, tuubadu waxay lahaan doontaa cadaadis xad dhaaf ah, waxay dhaawaceysaa qalabka ku xirma tuubbada, waxayna si weyn hoos ugu dhigeysaa adeegga adeegga ee nidaamka soonka.